Ny hantsana majika an'ny Moher | Vaovao momba ny dia
Ny hantsana mahagaga an'i Moher
ny Cliff of moher Iray amin'ireo zava-mahatalanjona fizahan-tany any Irlandy izy ireo ary eny, majika izy ireo. Ny fahatapahana tampoka amin'ny tany amin'ny fihaonany amin'ny ranomasina sy ny lanitra dia mahatalanjona. Fantatrao manokana ve izy ireo? Tsia? Avy eo izy ireo dia mety ho tonga toerana tena tsara, na dia amin'ny ririnina aza raha tsy mampatahotra anao ny hatsiaka sy ny rivotra.
Irlandy Tsy lavitra izany ka raha tianao ny hevitra eto dia avelanay anao ny fampahalalana momba ny hantsana sy ny fomba hanaovana ilay fitsidihan'ny mpizahatany tsy very ny tsara indrindra amin'izy ireo. Mamaky dia lavitra!
2 Tsidiho ny Cliff of Moher
Any amin'ny faritra fantatry ny Burren izy ireo, ao amin'ny county clare, Repoblikan'i Irlandy. 300 tapitrisa taona lasa izay no niforonan'izy ireo ary vatosokay ny ankamaroany, na dia eo am-potony aza ireo vato tranainy indrindra.
Eo anelanelan'ny vaky ao anaty vatobe dia miaina mihoatra ny Vorona 30 arivo, zavatra sahala amin'ny karazany 20, ary eo an-tongotr'izy ireo, any anaty ranomasina, dia misy feso, antsantsa ary liona an-dranomasina. Mandeha 14 kilometatra eo ho eo izy ireo ary amin'ny toerana avo indrindra tratrany 214 metatra ny haavony, ao amin'ny O'Brien Tower. Amin'ny lafiny iray hafa dia 120 metatra ny haavony, amin'ny teboka iray antsoina hoe Hag's Head.
Avy any an-tampon'ny O'Brien Tower ianao dia afaka mahita ny Nosy Aran, ny tandavan-tendrombohitra Pines roa ambin'ny folo na Galway Bay, ary noho ny hatsarany sy ny fomba fijeriny mahafinaritra dia io mpizahatany iray tapitrisa mahery mitsidika azy ireo isan-taona. Ho iray amin'izy ireo!
Ny hantsana dia ao anatin'ny Geopark avy any Burren sy Cliff of Moher ary teboka manan-danja amin'ny iray amin'ireo làlana mpizahatany malaza sy tsara indrindra natolotr'i Irlanda, ny Wild Atlantic Way.
Notsidihin'ny olona foana ny hantsana, saingy tamin'ny taona 90 dia nanomboka nandray azy io tamim-pahamatorana bebe kokoa ny governemanta ary nandamina fitsidihana. Noho io antony io, ary miaraka amin'ny foto-kevitra momba ny fizahan-tany voajanahary, tsy misy rafitr'olombelona izay manelingelina an'izao tontolo izao sy ny zavatra iainantsika, maoderina Ivotoerana mpitsidika ao anatin'ny ilan'ny havoana iray, alohan'ny hahatongavany amin'ny hantsana iray ihany.
Naharitra 17 taona ny asa ary nosokafana ny varavarana tamin'ny Febroary 2007. Aleo mitsidika an'ity toerana ity alohan'ny hivoahana hizaha ny hantsana satria manana fampisehoana mahaliana ny jeolojia ny toerana, zavamaniry, biby ary tantara. Misy efijery multimedia marobe, fijerin'ny mason'ny vorona ny morontsiraka, ary horonan-tsary amin'ireo lava-bato izay tsy ho tsidihinao mihitsy satria any anaty rano izy ireo, eo am-pototry ny lava-bato.
Ny fidirana amin'ity tranokala ity dia mora amin'ny tanàna sy tanàna rehetra manodidina. Avy any Galway, Kinvara, Limerick, Doolin, Ennistymon, Ennis na Lisdoonvarna afaka mandray bus ianao amin'ny zotram-panjakana Bus Éireann. Misy serivisy maromaro isan'andro ary raha tsy izany dia misy bus tsy miankina foana. Betsaka ny olona mijanona ao Doolin, noho ny fidirany mora amin'ny hantsam-bato, lalana folo minitra ity, nefa koa ho an'ny kolontsaina Irlandey taloha sy ny endrika tsy hay hadinoina.
Rahoviana no tokony hitsidika ny Cliff of Moher? Izy ireo dia iray amin'ireo manintona tsara indrindra any Irlandy ka amin'ny gara mahafinaritra indrindra dia misy olona maro. Izany no antony nilazako fa raha tsy mampatahotra anao ny hatsiaka na ny rivotra dia azonao atao ny mamporisika ny tenanao hitsidika azy ireo amin'ny ririnina.
Fitsidihana avy any Dublin na Galway, tanàna lehibe roa ((Dublin dia adiny telo ary Galway no 90 minitra), tonga eo anelanelan'ny 11 maraina sy 4 ora hariva ka miharihary fa sarotra ny vanim-potoana. Raha mandeha irery ianao dia tsara kokoa ny mandeha maraina na hariva be. Tsara ny filentehan'ny masoandro!
Vitsy ny mpizaha tany mandeha amin'ny halavan'ny vatolampy ary mijanona manodidina ny afovoany izy ireo, izany hoe, eo akaikin'ny O'Brien Tower sy akaikin'ny ampahan'ny rindrina. Raha tsy tafiditra ao anatin'ny fitsangatsanganana ianao dia manana fotoana bebe kokoa hahafahanao mandeha bebe kokoa, izay mety satria avela irery ianao. Ho fanampin'izay, afaka misoratra anarana ianao mitaingina ferry amin'ny fotony na amin'ny Làlana amoron-tsiraka 12 kilometatra ambonin'ireo hantsam-bato.
Ny Coastal Trail dia manomboka any Doolin ary tonga any Hag's Head manome ny toerana tsara indrindra: hantsam-bato, lanitra, riandrano, kirihitra na aiza na aiza, tsy misy fiara. Azonao atao samirery izany na misoratra anarana miaraka amin'ny mpitari-dalana anao. Mikasika izany dia misy tantsaha iray any an-toerana antsoina hoe Pat Sweeney izay mandamina ny diany isa-maraina amin'ny 10 ora maraina. Dia an-tongotra adiny telo izy ireo ary tena mahaliana.
Mampatsiahy anao aho tsy misy toerana atoriana amin'ny harambato mihitsy ary ny tanàna akaiky indrindra dia Doolin izay misy ny tolotra fampiantranoana na dia mifantoka kokoa noho ny zavatra rehetra ao amin'ny Bed & Breakfast aza izy io. Mazava ho azy fa misy trano fandraisam-bahiny lafo vidy miaraka amin'ny fomba tsy hay hadinoina.
Raha mandeha amin'ny ririnina ianao dia tsy maintsy mivondrona fa ny tena izy dia satria toa ny morontsiraka dia mila manao palitao foana ianao satria miova haingana be ny toetr'andro eto. Ny oram-panakorana indraindray dia mahazatra ihany koa ary miharihary, manao kiraro ahazoana aina izay tsy solafaka. Raha mijanona eo akaikin'ny Visitor Center ianao dia afaka mankafy ny cafeteria sy ny efitrano fidiany, fa raha mandeha irery ianao dia miezaha hanana izay ilainao.
Misy fefy hazo manasaraka ny faritry ny daholobe amin'ny toeram-piompiana tsy miankina nefa azonao atao ny mandingana azy ary manaraka ny làlana, na dia mampitandrina anao aza aho fa tsy voatahiry loatra ny lalana. Ary farany, fantatrao ve izany misy olona manambady eto? Eny, ao Doolin, ao amin'ny trano tsara tarehy sy mahafinaritra misy fahitana ny ranomasina, fa avy eo dia miakatra mankeny amin'ny hantsana ny mpivady ary maka sary mahafinaritra toa ireo etsy ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Irlandy » Ny hantsana mahagaga an'i Moher
Ny tranombakoka espaniola malaza indrindra amin'ny Instagram